I-Education Studio Broadcast & Security Command Center - iShenzhen Yonwaytech Co., Ltd.
Ubuchwepheshe be-HD digital display ukwenza ngcono ukusebenza kahle komsebenzi nokwenza ngcono umphumela wesiteji kunika amandla izitayela ezintsha kumagumbi wokulawula ukusakaza.
Ngokujula kancane kancane kobuchwepheshe bedijithali, obenethiwekhi nobolwazi embonini yomsakazo nethelevishini, amasiginali we-analog aguqulwa abe amasignali edijithali.
Ukusetshenziswa kokubonisa kwedijithali kwencazelo ephezulu nokuqapha okuhlakaniphile kusetshenziswa kakhulu, okuletha inguquko yesitudiyo sendabuko esibonakalayo.
Ithembekile ekusetshenzisweni okubalulekile kweMishini.
Kusukela ekwakhiweni okuqinile kwezimboni zensimbi kuya kubuchwepheshe obunikezwa amandla obunikazi obunamandla obunikazi obunamandla, izindonga zevidiyo ze-Yonwaytech zenzelwe izindawo ezibucayi zamahora angu-7x24.
Ukuhambisana namazinga okushisa ombala kusuka ku-3200k kuya ku-9300k nangaphezulu kokuphakama okuphezulu kwe-3840, kuze kufike ku-65536 kwesicelo sokulungiswa kokukhanya, futhi izilawuli zebhalansi ezimpunga ezinye zezici ezitholakala ekubonisweni kwe-Yonwaytech LED, okwenza zikulungele ngokukhethekile ukusetshenziswa emoyeni .
Okokufaka okutholakalayo kwe-HD-SDI kwamanye amamodeli kwenza ukuxhuma kwingqalasizinda yefa kube lula. Izindonga zevidiyo ze-Seamless ze-LED zinikela ngendwangu yezindaba, ezemidlalo noma imicimbi ehleliwe.